शान्ति लामा - | Nagarik News - Nepal Republic Media
शान्ति लामाका लेखहरु :
हराइयो भने के गर्ने?
इतान प्याज अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा बस्थे। सन् १९७९ मा उनी ६ वर्षका थिए। एकदिन उनी आफ्नो घरबाट स्कूल गएका थिए। तर उनी न स्कूल पुगे, न त घर नै फर्के। उनी स्कूल जाँदै गर्दा हराए। उनी हराएपछि बालबालिकाको सुरक्षाबारे धेरैले आवाज उठाए। सन् १९८३ मा आइपुग्दा अमेरिकाका त्यतिबेलाका राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले मे – २५ लाई ‘नेसनल मिसिङ चिन्ड्रेन डे’ अर्थात ‘हराएका बालबालिकाको राष्ट्रिय दिवस’ घोषणा गरे।
शान्ति लामा १२ जेष्ठ २०७५ शनिबार ७ मिनेट पाठ
उपत्यकामा अचेल जात्रैजात्रा छन्, जात्रामा भोज अनि भोजमा समयबजि उपत्यकाका जात्राहरूमा भोजको ठूलो महत्व छ ।
शान्ति लामा ७ वैशाख २०७५ शुक्रबार ९ मिनेट पाठ
पुरानो बानेश्वर चोकैमा भर्खरै खुलेको छ, भक्का हाउस । भक्काको स्वाद सम्झने र यसबारे बुझ्ने चाहनेहरूको लर्काे हिजोआज त्यतै सोझिएको छ।
शान्ति लामा ३० चैत्र २०७४ शुक्रबार १२ मिनेट पाठ
लोकप्रिय धराने कालो बंगुर
किराँत समुदायमा सबैभन्दा लोकप्रिय मासु हो, बंगुरको मासु । बंगुरको मासुलाई विभिन्न सांस्कृतिक कार्यमा समेत प्रयोग गरिन्छ। राई तथा लिम्बु जातिमा बंगुरको मासु खान कुनै चाडपर्व वा अवसर पर्खनुपर्ने चलन छैन।
शान्ति लामा २३ चैत्र २०७४ शुक्रबार १३ मिनेट पाठ
महिला समूहको भान्छा
हाम्रो समाजमा आज पनि भान्छाको काम महिलाकै जिम्मामा छ । त्यसैले पकाउने–खुवाउने सीपमा महिला अब्बल पनि छन् । तर महिनाभरि खाना पकाएबापत गृहिणीले न ज्याला पाउँछन्, न त तलब।
शान्ति लामा १६ चैत्र २०७४ शुक्रबार १२ मिनेट पाठ
तिमाल जात्रा सुरु
तामाङ जातिले मनाउने तिमाल जात्रा सुरु भएको छ । चैत शुक्ल पूर्णिमामा मनाइने जात्रा बिहीबार सुरु भएको हो । बिहीबार नमोबुद्ध दर्शन गरी चैत शुक्ल चतुर्दशी (शुक्रबार) बौद्धमा मेला भरिन्छ । त्यसपछि बालाजु बाइसधारामा नुहाएर चैत शुक्ल पूर्णिमाको दिन स्वयम्भूमा ठूलो मेला लाग्छ।
शान्ति लामा १६ चैत्र २०७४ शुक्रबार ५ मिनेट पाठ
पर्यटन नगरी विकास गर्ने अभियान
अघिल्लो बिहीबार स्वयम्भू महाचैत्यमाथि बिहानै नेपालको झण्डा अंकित ठूलो बेलुन उडाइयो । बेलुन नेपाल मण्डल पर्यटन नगरी महोत्सवको उद्घाटन स्वरूप उडाइएको थियो । तीन महिनासम्म चल्ने महोत्सव आगामी वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा सम्पन्न हुँदै छ ।
शान्ति लामा ४ फाल्गुन २०७४ शुक्रबार १५ मिनेट पाठ
'खान जान्दैनाैँ हामी'
गत मंगलबार दिउँसो एस स्कुल अफ टुरिजम एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट पुग्दा मास्टर सेफ नारायण थपलिया सेतो कमिज र सेतै टोपी लगाएका केही युवालाई प्रशिक्षण दिन व्यस्त थिए । विद्यार्थीलाई किचेन सफा गर्न पठाएपछि उनले भने, ‘सेफको जीवन नै किचेन हो । त्यसैले किचेनको सबै गतिविधि र अवस्थाको जिम्मेवार सेफ हुनुपर्छ।’
शान्ति लामा २६ माघ २०७४ शुक्रबार ११ मिनेट पाठ
मामग्रेनको जीवन गीत
झुल्के घाम आधा निक्लेको छ सुनापति डाँडामाथि । तिल फुलेर पहेँलै छ बारी । शरदको सिरेटो र फूलमा माहुरीको भुनभुन । मादकता छ वातावरणमा । माथि गुम्बामा ञ्युङ्ने बस्नेहरूको मोलम पाठमा बजेको घ्यालिङको धुनले आनन्दित बन्दैछ अन्तरमन ।
शान्ति लामा २० माघ २०७४ शनिबार १५ मिनेट पाठ
विमल थापाले नन्दन स्विट्स, न्युरोडमा काम गरेको २० वर्ष भयो । यत्तिका वर्षमा नेपालीको खानपानको शैली धेरै बदलिएको उनले देखेका छन् । पसलमा गएर मिठाई खाने चलन पहिले निकै कम रहेको उनी बताउँछन् । अहिले होटल रेस्टुराँ गएर खाने चलन बढेको छ । उनी काम गर्ने नन्दन स्विट्समा पछिल्ला वर्ष डोसा खाने ग्राहक निकै बढेका छन् । ‘पहिले धेरै इन्डियन र मारवाडी समुदायका मानिसले खान्थे, अहिले धेरै नेपालीले पनि खान्छन्,’ थापा भन्छन्, ‘डोसा नचिन्ने मान्छे भेटेको छैन ।’ हरेक दिन दर्जनौँ डोसा नन्दन स्विट्सको किचेनमा बन्ने गरेको उनी सुनाउँछन्।
शान्ति लामा १९ माघ २०७४ शुक्रबार ९ मिनेट पाठ
डेढ सय वर्ष पुरानो खाजा पसल
भक्तपुर, दतात्रेयस्थित भीमसेन पाटीको सामुन्ने उत्तरतिर फर्किँदा देखिन्छ, ढोकामा पुरानो सादा पर्दा लगाइएको खाजा पसल । साला गणेशस्थानको कायस्थ परिवारको स्वामित्वको यो पसल एक सय पचास वर्षभन्दा पुरानो हो । पसलको अहिलेका मालिक हुन्, ७३ वर्षका चिरञ्जीवि कायस्थ।
शान्ति लामा ५ माघ २०७४ शुक्रबार ९ मिनेट पाठ
सोनाम ल्होछार माघ कि फागुनमा ?
केही दिनअघि नेपाल तामाङ घेदुङले माघ ४ गतेको बिदा सारिदिन भनेर सरकारलाई अनुरोध गरेपछि विवाद बढेको हो । घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोलेले भने, ‘सोनाम ल्होछारको तिथि तय आफ्नै परम्परा छ । यो चन्द्र पात्रोअनुसार तय गरिन्छ । यो पात्रोअनुसार ल्हो (वर्ष) फिर्ने दिन फागुन ४ मै पर्छ ।’
शान्ति लामा २९ पुस २०७४ शनिबार १४ मिनेट पाठ
माघीमा थारु परिकार
नयाँ वर्ष भएकाले माघीका दिन मिष्ठान्न खाने चलन पनि छ । काठमाडौंमा रहेका थारु समुदायले टुँडिखेलमा माघी महोत्सव गर्दै आएको छ । माघी महोत्सवमा थारु परिकार चाख्नका लागि पनि धेरै जाने गरेका छन् ।
शान्ति लामा २८ पुस २०७४ शुक्रबार १२ मिनेट पाठ
इलाको कलेज लाइफ
आमाको कडा अनुशासनको नियमले इला शर्मालाई कलेज जीवनमा पनि छोडेन । पढाइमा तेज उनी पढाइ बाहेकका क्रियाकलापमा कमै सहभागी भइन् । त्यसैले कलेजका दिनहरु कहिलेकाहिँ बोरिङ पनि लागेको उनी सुनाउँछिन् । बोरिङ नहोउन् पनि कसरी ? उनले ब्याच्लर सिध्याइ सक्दासम्म एउटा पनि फिल्म हेर्न पाइनन् । ‘त्यतिबेला सिनेमा टेलिभिजनको प्रभाव थिएन । त्यसमाथि घरमा धेरै नै कडा अनुशासन थियो ।’ पढाइलेखाइलाई निकै महत्व दिने घरमा हुर्किएकी इला सम्झन्छिन्, ‘त्यसैले आठ कक्षादेखि बिएससी पास गरुन्जेल कुनै फिल्म हेर्न पाइनँ । लाइफ अलिअलि बोरिङ नै थियो ।’
शान्ति लामा १८ पुस २०७४ मंगलबार ५ मिनेट पाठ
जहाँ जल्नका निम्ति लासलाई एकरात छाडिन्छ
काठमाडौंमा एउटा यस्तो मसानघाट छ, जहाँ लासमा आगो सल्काई मलामी घर फर्कन्छन् । र, भोलिपल्ट मात्र खरानी सेलाउन पुग्छन् ।
शान्ति लामा ३ पुस २०७४ सोमबार ५ मिनेट पाठ
शान्ति लामाका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्